दमक पनि वातवरणिय प्रदुषणको खतरा जोनमा ! हेल्चेक्राई नसोचौ र नगरौ | Prabhavkari News
दमक पनि वातवरणिय प्रदुषणको खतरा जोनमा ! हेल्चेक्राई नसोचौ र नगरौ
दमक/ अहिले देशभर वातवरणीय प्रदुषणको बिषयले बहस भइरहेको छ । देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय अस्विकार गर्ने देखि लिएर यसलाई हौवा पिटाईएको भनेर पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा लेखिएको भेटिएको छ । वातवरणिय प्रदुषण मापन गर्ने यन्त्र झापाको दमकमा पनि राखिएको छ ।
जहाँ दमकको मात्र होइन देशभरको बिभिन्न शहरहरुको वातरणिय अवस्था समेत हेर्न सकिन्छ । यसको विवरण हेर्ने हो भने दमक वातवरणिय प्रदुषणको हिसावले निक्कै खतरा अवस्था मान्न सकिन्छ । अन्य कतिपय ठाँउहरुभन्दा पनि वातवरणिय प्रदुषण दमकमा बढि देखिएको छ । तुलानत्मक रुपमा बिराटनगरभन्दा दमक खतरा देखिएको छ (मंगलवार अपरान्हको वायुप्रदुषण मापन यन्त्रमा देखिएको) ।
एयर क्वालिटी इन्डेक्स एक्यूआई भ्याल्युमा परिवर्तित गरेर कलर कोड गरेर राखिएको पाईन्छ । एक्यूआई भ्याल्यु ३ देखि १२ घण्टाको दौरानमा कणहरूको घनत्व फरक भएका बेला नाप्ने गरीन्छ । यसलाई आधारमान्दा दमक रेड जोनमा रहेको छ । यसले गर्दा हेल्चेक्राई गर्ने गर्दा यसले असर गर्न सक्छ । खतराबाट बच्न स्थानीय सरकारले पनि नगरबासीलाई सचेत गरानु पर्छ ।
रेड कलरमा दमकको वातवरण देखाएको छ । यसले अस्वस्थकर वातवरणको रुपमा ब्याख्या गरिएको छ । अझ एकदमै अस्वस्थकरतर्फ उन्मूख भएको पनि देखिन्छ । वायु गुणस्तर इन्डेक्सको सूचक १९१ कटेको छ । सामान्यतया वायु गुणस्तर इन्डेक्सको सूचक ५० भन्दा कम भयो भने हावाको गुणस्तर राम्रो मानिन्छ भने ५१ देखि १०० सम्म सुरक्षित मानिन्छ । त्यसभन्दा माथि जति धेरै हुन्छ स्वास्थ्यका लागि त्यति धेरै हानीकारक हुन्छ । वायु गुणस्तरको सूचक ३०० भन्दा बढी भयो भने मानव स्वास्थ्यको लागि निकै खतरा मानिन्छ ।
दमकको वातवरणिय प्रदुषणलाई हेर्दा बिज्ञहरुको सुझाव अनुसार खुला ठाउँमा लामो समयसम्म वा कडाखाले शारीरिक गतिविधि नगर्नुहोला । खुला ठाउँमा गर्ने काम घरभित्रै गर्नुहोला वा वायुको गुणस्तर अलि राम्रो भएको बेला गर्नुहोला । खुला ठाउँमा लामो समयसम्म वा कडाखाले शारीरिक गतिविधि कम गर्नुहोला । खुला ठाउँमा काम गर्दा धेरैपटक विश्राम लिइराख्नुहोला ।